Uncategorized – Page2– မြန်မာသတင်းစုံ
ပရိသတ်ကြီးရေ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ရဲလေးမကတော့ ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုများစွာရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ရဲလေးမကတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားသလို ပွင့်လင်းပြီးစိတ်ထားကောင်းမှုတို့ကြောင့်လည်း အားလုံးကအချစ်ပိုနေရသူပါနော်။ ရဲလေးမကတော့ အခုဆိုရင်တော့အနုပညာအလုပ်တွေအပြင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုလည်း လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ရဲလေးမကတော့ စိတ်ထားကောင်းသလို အလှူအတန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း ရောက်လေရာမှာ သူတတ်နိုင်သလောက်အလှူအတန်းတွေပြုလြပ်လေ့ရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်လည်း ရဲလေးမက မန်းလေးမြို့လေးကိုရောက်ရှိနေတုန်းမှာ ကုသိုလ်လေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကို အခုလိုပဲမျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ ရဲလေးမကတော့ “ မန်းလေးမြို့58လမ်းအောင်ဆန်းလမ်းဒေါင့်အုတ်ခုံနေပူပူမှာပန်လေးတွေထိုင်ရောင်းနေရှာတဲ့အမေကြီးပါသနားလို့ဆိုင်ကယ်ရပ်ပြီးရှိ့တဲ့ပန်းအကုန်ဘယ်လောက်လဲလို့အကုန်ဝယ်မေကြီးသုံးဖို့သက်သက်ကန်တော့ခဲ့ပြီးကုသိုလ်ယူခဲ့ပါတယ်ဒီအသက်ရွယ်ဟာပုတီးတစ်ကုံးနဲ့ဘုရားစင်အရှေ့နေရမယ့်အရွယ်ပါသနားစိတ်နဲ့မျတ်ရေလည်းကျမိရနေရမယ့်အရွယ်ပါသနားစိတ်နဲ့မျတ်ရေလည်းကျမိရင်းနောက်လည်းအမေကြီးဆီအမြဲသွားလှုပါ့မယ်မန်းလေးရောက်တိုင်းပေါ့ ”ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးကလည်ည်း ရဲလေးမရဲအလှူလေးအတွက် သာဓုခေါ်ဆိုပေးခဲ့ပါအုံးနော်…။
မင်းသမီးတွေအတွက် အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေဟာ သူတို့ရဲ့မိတ်ကပ်ဆရာတွေပါပဲ။ ဒီနေ့မှာလည်း သင်ဇာက သူမရဲ့မိတ်ကပ်ဆရာနှ စ်ယောက်ကို အကြီးအကျယ်ဆေးထိုးလိုက်ပါတယ်။ သူမ အိမ်ကနေ ထွက်သွားတဲ့ သူသူအောင်နဲ့ စွာစွာကို သူခိုးပါလို့ အကျယ်ကြီး အော်ပြီး စနောက်ခဲ့ တာပါ။ ဒီလို စနောက်ပြီးတော့လည်း သဘောတကျနဲ့ ရယ်နေပါသေးတယ်။ သုံးယောက်သားက အရမ်းကိုရင်းနှီးပြီး အလုပ်အတူတူလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းပါတနာတွေဆိုတာ ထက် ညီမတွေလို ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်တွေလို ရင်းနှီးနွေးထွေးကြပါတယ်။ အမြဲတမ်း သင်ဇာ့နောက်က တကောက်ကောက်လိုက်ပြီး သင်ဇာ့ရဲ့လှပမှုတွေကို တာဝန်ယူထားရသူ တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူသူနဲ့ စွာစွာကို ဆေးထိုးလိုက်တဲ့ Read more
ပရိသတ်ကြီးရေ သားညီကတော့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျရာဇာရုပ်ကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ် ပရိသတ်အားပေးမှုများစွာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်မှာဆိုရင်တော့ သားညီက သရုပ်ဆောင်အပြင်ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရပ်တည်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ သားညီကတော့ Covid ကာလမှာလည်း ပရိသတ်တွေအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို မျှဝေပးခဲ့တဲ့အပြင် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ခံစားချက်လေးတွေကိုလည်း လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားလေ့ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ သားညီက သူအနေနဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို အစွမ်းရှိသလောက်ကြိုးစားပြီး လုပ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အခုချိန်ထိနေရာပေးမခံရသေးတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။ သားညီကတော့ “ လူရာဝင်အောင် ဘာတွေလုပ်ရလဲဗျ !!!အစွမ်းရှိသလောက်တော့အလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးစေတနာထား လုပ်ခဲ့တာပါပဲ …အခုအချိန်အထိနေရာပေး အသိအမှတ်ပြု မခံရတာတော့ကျွန်တော် ညံ့နေသေးလို့နေမှာပါ နှစ်ဆတိုးပြီး ကြိုးစားရဦးမှာပေါ့ Read more
ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်နိုင်ငံကျော်ဘောလုံးသမား အောင်သူနဲ့ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးချောလေး ပိုးအိအိခန့်တိုကစုံတွဲလေးကတော့ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တည်ဆောက်ထားနိုင်တဲ့ စုံတွဲလေးတစ်တွဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာသားသားလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သားသားလေးက အသက်(၁)နှစ်နီးပါးရှိနေပါပြီ။ သားသားလေးက အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက်လောက်အောင် ချစ်စရာကောင်းလှတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကအချစ်ကြီးချစ်နေခဲ့ရသလို မေမေပိုးအိအိခန့်ကလည်း သားသားလေးကို ကြည့်ပြီးချစ်မဝဖြစ်နေခဲ့ရပါသေးတယ်။ သားသားလေးကိုချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် မေမေ ပိုးအိအိခန့်က သားသားလေးရဲ့ ချစ်စရာပုံလေးတွေကို ကြည့်ရှုလို့ရအောင် သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမျှဝေဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ မေမေပိုးအိအိခန့်ကတော့ ပုံလေးတွေနဲ့အတူ သားသားလေးရဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးချစ်လွန်းလွန်းလို့ ဘယ်လိုတောင်လုပ်ရမလဲမသိဘူး။ ဖုန်းထဲမှာလည်း သားသားလေးရဲ့ပုံတွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်လို့လည်း ပြောပြထားပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးတွေထဲမှာရော သဲကိုးလေးကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေရှိလား။
ပရိသတ်ကြီးရေ ယောကျာ်းပီသတဲ့အမိုက်စားဘော်ဒီကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့သဲသဲလှုပ်အားပေးခြင်းကို ခံနေရတဲ့ အောင်မင်းခန့်ကတော့ MRTV4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေက တစ်ဆင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အောင်မင်းခန့်ကတော့ ကာရိုက်တာတိုင်းကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ဦးဆိုလဲ မမှားပါဘူးနော်..။ အောင်မင်းခန့်ကတော့ အခုဆိုရင် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေသာမက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလောမှာဆိုရင်လည်း ကြော်ငြာတွေဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေရသူတစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် အောင်မင်းခန့်ကတော့ သူ့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် လူမှုကွန်စာမျက်နှာကနေ အမြဲမျှဝေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်း “မျက်လုံးမှာအလွမ်း နှုတ်ခမ်းမှာ မာန”ဇာတ်လမ်းတွဲမှာအတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ နေခြည်ရွှန်းလဲ့နဲ့အတူ ရိုက်ကူးရေးလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။အောင်မင်းခန့်ကတော့ “ အောင်မှန်းနဲ့နှင်းနွေ လေးကိုသတိရသေးလား”ဆိုတဲ့ Caption လေးနဲ့ ပုံလေးတွေကို မျှဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း အောင်မင်းခန့်တို့ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
Unicode မငျးသမီးကွီး မသေနျးနုဟာ မကွာသေးမီက ထောငျကနလှေတျလာခဲ့ပါတယျ… ခုလို ပွနျလညျလှတျလာတာကွောငျ့ ပရိသတျတှလေညျး အားလုံးဝမျးသာခဲ့ကွတာပါ…. မသေနျးနုဟာထောငျကနြစေဉျအတှငျးမှာ သူမကွုံတှခေဲ့တဲ့ အဖွဈအပကျြတှကေို ခုလိုပွောပွခဲ့ပါတယျ “ဟိုထဲမှာအားလုံးအဆငျပွတေယျ။ ကိုယျလာမယျဆိုတာ ကနျြတဲ့သူတှကေ ကွိုသိနတော အားလုံးကနှေးနှေးထှေးထှေးနဲ့ ဆကျဆံတယျ။ စိတျတဈခုကတော့ အမွဲကဆြုံးနတောပေါ့။ သားလေးအတှကျပိုစိတျမကောငျးဖွဈမိတယျ။ အမကေ ထောငျကခြဲ့ရတော့ သူ့ကို ပိုသနားတယျ” လို့ဆိုလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စိတျမကောငျးဖွဈနတေဲ့ မသေနျးနုကို အားပေးစကားလေးဆိုခဲ့ကွပါအုံးနျော… Writer ; Kwee (Jeeptoolay) Source ; Myanmar Celebrity ZawGyi Read more
ပရိသတျကွီးရေ ရှူးပြံကွီးဆိုတာကို စာတှထေဲမှာ သငျဖူးကွမှာပါ…ယနခေ့တျေမှာတော့ မတှတေ့ော့ပါဘူးနျော… ခုတော့ ရှူးပြံကွီးနဲ့ တူတယျလို့ ယူဆရတဲ့ ကြောကျဖွဈရုပျကွှငျးကို တှရှေိ့ခဲ့ပါပွီ…. ဒါပမေယျ့ ဘာကောငျလဲဆိုတာ တိတိကကြသြိဖို့ ပညာရှငျတှေ လလေ့ာကွအုံးမှာပါ… “၅.၇.၂၀၂၀ ရကျနကေ့ရနေံခြောငျးမွို့ တှငျးကုနျးရပျကှကျသင်ျခြိုငျးကုနျး၏အနောကျဘကျရုနျကုနျမန်တလေးကားလမျးမကွီး၏ အနောကျဘကျ တှငျရှေးနှဈသနျးပေါငျးမြားစှာကတိရစ်ဆာနျ ကွီးတဈကောငျ၏ကြောကျဖွဈရုပျကွှငျးတဈခုကိုဆိတျကြောငျးသား တဈယောကျက စတငျ တှငျးကုနျးရပျကှကျသင်ျခြိုငျးကုနျး၏အနောကျဘကျရုနျကုနျမန်တလေးကားလမျးမကွီး၏ အနောကျဘကျတှငျရှေးနှဈသနျးပေါငျးမြားစှာက တိရစ်ဆာနျ ကွီးတဈကောငျ၏ကြောကျဖွဈရုပျကွှငျးတဈခုကိုဆိတျကြောငျးသား တဈယောကျက စတငျတှရှေိ့ခဲ့ပါသညျ။ သကျဆိုငျရာရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးထံသတငျးပို့ခဲ့သဖွငျ့ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးခိုငျကွီးကတဆငျ့သကျဆိုငျရာ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးထံသတငျးပို့ခဲ့သဖွငျ့ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးခိုငျကွီးကတဆငျ့ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးထံ သတငျးပို့တငျပွခဲ့ပါသညျ။ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးကလညျးသကျဆိုငျရာ ဘူမိဗဒေပညာရှငျမြားနှငျ့ ရှေး/ သု Read more
ဆေးရုံတင်ထားရတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ကျန်းမာရေးတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာလို့ ဝမ်းသာနေတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
ဆေးရုံတင်ထားရတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ကျန်းမာရေးတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာလို့ ဝမ်းသာနေတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်မင်းသမီးချော ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်ခန့်ကစပြီး ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတာကို ပရိသတ်တွေ သိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဆေးရုံတက်ချိန်ကနေစလို့ ဖခင်ရဲ့အနားမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ ထက်ထက်ရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း ထက်ထက်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ အမြန်ဆုံးပြန်လည်ကျန်းမာလာစေဖို့ကိုဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးနေကြပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ထက်ထက်က သူကရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဖခင်ရောဂါဝေဒနာတွေ သက်သာပျောက်ကင်ဖလဲသက်သာလာတာတွေ့ရတော့သမီးပင်ပန်းရကျိုးနပ်ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့၇နှစ်ခန့်က ischaemic heart disease ဖြစ်တော့သွေးကြော(၂) ချောင်းချဲ့ရတယ်အချိန်မှီအသက်ကယ်လို့ရခဲ့တယ်။ အခုလဲပြန်သက်သာလာအောင်သမီးကြိုးစားခွင့်ရခဲ့တယ်အဖေလဲအဖေ့ရဲ့သီလနဲ့ကျမကိုချစ်တဲ့သူတွေဝိုင်းပီးဆုတောင်းပေးကြတဲ့တွက်အဖေသက်သာလာတာ ကျမဘဝဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်” လို့ဖော်ပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ ထက်ထက်ရဲ့ဖခင်ပြန်လည်သက်သာလာတဲ့အတွက် Read more
မည်သူမှဆွမ်းဦးမကပ်နိုင်သောစစ်ကိုင်းက ဆွမ်းဦးပုညရှင်စေတီတော်သမိုင်း ပင်းတယမြို့ တစ်စီးရှင် သီဟသူမင်းတရားကြီးနှင့် နောင်အခါ စစ်ကိုင်းမြို့တည် အသင်္ခယာစောယွန်းမင်းကြီး၏ သေနာပတိအမတ်ကြီးဖြစ်သူ ဦးပုညက သက္ကရာဇ်(674)ခုနှစ်တွင် ဤစေတီတော်ကို တည်သည်။ပုညအမတ်ကြီးက တည်သောကြောင့် ပုညဘုရား ပုညစေတီဟု အစကနဦးက ခေါ်ကြသည်။များမကြာမီ ဓာတ်တော် နှစ်ဆူကို ခိုးယူမှု အသိမပေးပဲ ဘုရားတည်မှုတို့ကြောင့် အသင်္ခယာ စောယွန်းမင်းကြီးက ပုညအမတ်တို့ကို စစ်ကိုင်းမြို့တွင် ရေချသတ်လေသည်။သို့သော် အသက်မရှိသည့်ရေက အသက်ရှိသလိုဖြစ်ကာ ရေကနောက်ဆုတ်ပြီး ဘေးကဝန်းရံပြီး ခြံရံထားမှုကြောင့် ရေမနစ်ပဲ ဦးပုညတို့ အသက်ရှင်ကြလေသည်။ထိုအရပ်ကို ရေဝန်းအရပ်ဟု ခေါ်သည်။အသင်္ခယာစောယွန်းမင်းက ရေချသတ်သော်လည်း ပုညအမတ်တို့ Read more
အခြေခံပညာကျောင်းများ တစ်နေ့လျှင် လေးနာရီနှင့် စာသင်ချိန်ငါးချိန် သာသင်ကြားရန် ညွှန်ကြားစာထုတ်မည်
အခြေခံပညာကျောင်းများ တစ်နေ့လျှင် လေးနာရီနှင့် စာသင်ချိန်ငါးချိန် သာသင်ကြားရန် ညွှန်ကြားစာထုတ်မည် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများ တစ်နေ့လျှင် လေးနာရီနှင့် စာသင်ချိန်ငါးချိန်သင်ကြားရန် ညွှန်ကြား စာထုတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှသိရသည်။ ကျောင်းစာသင်ချိန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဇူလိုင်၃ရက်၌ People Media သတင်းဌာနမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်းကပြောသည်။“ဆရာ၊ ဆရာမတွေတစ်နေကုန်mask တပ်ပြီး စာသင်ဖို့က ဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ ဒါကြီးကို ကလေးတပ်ခိုင်းလဲ တစ်နေကုန် ဘယ်ရမလဲ။ အခုလည်းဆရာတို့လည်း စာထွက်ဖို့ရှိတယ်။ တစ်နေ့ကို အများဆုံး လေးနာရီပဲ စာသင်ဖို့လေ။ ငါးချိန်ပဲသင်ဖို့ဆိုပြီး မနေ့က Read more